Fanapariahana Avy Ao Ogandà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Septambra 2018 13:07 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Oktobra 2006)
Satria nahoana ny olona no mety hihevitra fa ireo fifandresendahatra mikasika ny fandriampahalemana dia hizotra fotsiny tsy hisy fandrahonana fitadiavana vahaolana avy amin'ny Fitsaràna Iraisampirenena (ICC/CPI)? Tsy maintsy apetrak'i Museveni ireo fepetra mba hitazonana ny CPI ho lavitra an'i Kony sy ireo mpitari-tafika miaraka aminy, raha tsy izay tsy hisy fandriampahalemana mihitsy miaraka amin'ireo olona dimy ireo. Mifanilika foana ireo olana roa ireo. Raha tsy eo ireo lehilahy dimy ireo, Tsy maintsy ovàna ireo fifandresendahatra fikatsahana fandriampahalemana, satria ny vahoaka ogandey any anatin'ireo faritra voakitika dia mbola mila ny fandriampahalemana avy amin'ny governemantan'i Museveni. Roapolo taona nisianà tsindry hazo lena sy tsy fifampitokisana tsy ho azo foanana velively anaty fanaovan-tsonia tsotsotra ireo anton-taratasy ao Juba.
Mandritra izany, mampilaza ny Uganda-CAN fa misy ireo fanamby somary tsy tazana momba ny fiarovana ao amin'ny faritra atsinanan'i Karamoja, izay raiki-tampisaka any n y fiparitahan'ireo fitaovam-piadiana maivana. Uganda-CAN milaza fa ireny fitaovam-piadiana maivana ireny dia miampita ny sisintany avy any Sodàna ary manambana ny hiparitaka any avaratr'i Ogandà.
Raha mbola mitohy ireo fifampiresahana hikatsahana ny fandriampahalemana eo amin'ny governemanta Ogandey sy ireo mpikomy an'ny LRA, ny tany tsy tàn-dalàna sy ny herisetra kosa misafotofoto ao Atsinanana, toy ny tsy misy mahamarika. Per Engebak, talen'ny Unicef ho an'i Afrika Atsinanana sy Atsimo, nanambara fa na dia voasonia aza ny fifanarahana fandriampahalemana, manambana ny hiitatra hatrany Avaratra, faritra rotiky ny ady, kosa ireo herisetra ao amin'ny faritra atsinanan'i Karamoja ao Ogandà.
Tao anatin'ireo vaovao mahavelom-panantenana kokoa, manana tantara iray maha-velombolo momba ny fiarenan'ny indostrian'ny fizahantany ny Basawad's Safari Notes, jerena avy amin'ny mason'ny Bwindi National Park, ao andrefan'i Ogandà.
Tsy ny tantara rehetra akory no ratsy. Tsara ireo sasany. Ny sasany tena tsara ary maha-velombolo. Iray amin'ireo tantara tena maha-velombolo ny an'i Bwindi; Valam-pirenena ao Bwindi, Ogandà. Ny fiarenan'i Bwindi ho toy ny fisarihana fizahantany lehibe dia fitaratra ijerena ny fiarenan'ny indostrian'ny fizahantany ao Ogandà.
Mandritra ireo taona nitondran'i Idi Amin sy ireo taona nifandimby taorian'izay, maro ireo mihevitra fa tsy hiarina mandrakizay i Ogandà, tsy ho fihantsonana ara-pizahantany mahasarika velively. Marobe ihany koa ireo nihevitra fa ny tena goavana amin'ny fisarihana – indrindra fa ny biby – dia tsy ho fisarihana be ho an'ireo mpizahatany intsony.
Manoratra fitsikeràna iray an'ireo Taratasy avy any am-Ponja nosoratan'i Andrew Mwenda ny Openminded.com. Mwenda dia mpanao gazety tena be mpanaraka indrindra ao Ogandà, izay nofonjaina nandritra ny fotoana fohy tamin'ny volana Aogositra 2005 noho ny fandinihany mikasika ny antony nahafaty ny filoha lefitra John Garang, mpitarika avy any Sodana Atsimo, .
Ny fanaovana ho isanandininy ny bokin'i Mwenda mikasika ny “fonjany” dia fanehoana marina araka ilay fomba fiteny taloha manao hoe “Ireo mpandresy hatrany no manoratra ny tantara”. Sahobakaka ambony riana i Mwenda rehefa nanoratra hoe, rehefa mijery an'ireo bokin-dalàna ao Ogandà ianao, toy ny hoe narafitry ny kaomity iray nahitàna ireo lehilahy dimy lozabe – Adolf Hitler, Benitto Musolini, Joseph Stalin, Idi Amin sy Pol Pot no famaky ny rafitra araka ny lalàna mifehy ny media. Na izany aza, ao anatin'ny ampahany voalohany mitondra ny lohateny hoe “Ny hevitra manodidina ny fisamborana ahy”, nesorin'i Mwenda tamim-pitandremana fatratra ireo antsipirihan'ny tantara rehetra. Tsy soratany araka ny tokony ho izy izay nolazainy tao amin'ny onjampeo ka nanosika ny governemanta hisambotra azy. Amin'ny maha olona nihaino ny fandaharana mivantana tamin'ny 10 Aogositra 2005 sy namaky ny fanoratana ny fandaharana manontolo taty aoriana tao anatin'ny The Sunday Vision tamin'ny 14 Aogositra, 2005, hitako fa tsy ampy tatikady ireo taratasy nosoratan'i Mwenda avy any am-ponja ka tsy nahataitra ny hevitry ny vahoaka hitodika any aminy.
Ny In an African Minute manoratra mikasika ny traikefany “matsiro” tao anatin'ny trano Etiopiana fisakafoanana iray ao Ogandà:
Toy izao no fipetraky ny antanan-tohatra misy amin'ireo toeram-pisakafoanana Etiopiana ao Kabalagala: raha te-hamono lolo tovovavy ianao na mankafy ny tsiron'ny swank, mandehana any Fasika Up , tanàna etiopiàna ilay arabe, toeram-pisakafoanana sy fisotroana amin'ny vidiny mirary. Vitsy amin'ny olona no mandeha any ambadik'ireo faritra ambany amin'izay hita maso ao Kabalagala. Na izany aza, eny amparan'ny làlana, miorina eo anelanelan'ireo trano fisotroana roa eo an-toerana no misy, araka ny lazain'i J. Slab, ny ivon'ny tsiron-kanina.
Toerana tsy mieboebo ny Rehobot. Misy latabatra 4 sy latabatra iray fanaovana ‘billard’ ary tantanan'i Mamma, miaraka ami'ireo mpanampy azy anankiroa, dia ny zanany vavy 9 taona sy ny zanany lahy 16 taona. Manao sakafo mahagaga amin'ny hena omby sy legioma i Mamma miaraka amin'ireo singa fototra ho an'ny fahandroan-tsakafo Etiopiana: injara (mofo fisaka misy lalivay mievotrevotra), berbère (vovoka sakay mena masiaka be) ary niter kebbeh (dobera maivana misy sakamalao sy tongolo lay).